Faah faahin laga helay cida laheyd lacagtii shalay lagu qabtay Garoonka Muqdisho | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Faah faahin laga helay cida laheyd lacagtii shalay lagu qabtay Garoonka Muqdisho
Faah faahin laga helay cida laheyd lacagtii shalay lagu qabtay Garoonka Muqdisho
Ehelada gabadha oo ila soo xiriiray ayaa sheegay in gabadha ay Kenya uga Ganacsato dahab, waxaana gabadha saaka soo gaartay Muqdisho, iyadoo hadda ku sugan Saldhigga Booliska garoonka diyaaradaha, booliska ayaa gabadha su’aalo weydiinaya warbixin ka qoraya.
Lacagta shalay lagu qabtay garoonka diyaaradaha waxaa waday nin ay gabadha u soo dhiibatay lacagta, waxaana baaritaankii shalay ciidamada ku sameeyeen ninka waday uu u sheegay inay leedahay gabar ganacsato, waxaana xiriir taleefan oo dhex maray gabadha iyo Booliska laga codsaday inay la timaado cadeymaheeda.
Taliyaha Booliska Jen. Xijaar ayaa shalay sheegay in ciidanka Booliska ee saldhigga garoonka diyaaradaha ay gacanta ku dhigeen lacag si sharci darro dalka ku soo gashay oo ka timid dalka Kenya.
Previous articleCongo oo war kasoo saartay ujeedka safarka Farmaajo iyo tuhun la xiriira Kenya iyo Qatar oo soo baxay
Next articleMadaxweynaha Puntland oo cafis u fidiyay 66 maxbuus bisha Ramadaan awgeed